Gaalkacyo iyo tuulooyinka ku dhaw oo roobkii dayrtu si weyn ugu hooray [SAWIRO] • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Gaalkacyo iyo tuulooyinka ku dhaw oo roobkii dayrtu si weyn ugu hooray [SAWIRO]
Gaalkacyo iyo tuulooyinka ku dhaw oo roobkii dayrtu si weyn ugu hooray [SAWIRO]
November 6, 2011 - By: Moha Salat
Iyadoo muddooyinkii u danbeeyay laga soo dayrinayay Xaaladda abaareed ee ka jirta nawaaxiga Magaalada galkacyo ee xarunta gobalka mudug ayaa haddana habeenkii xalay ahaa waxaa ka da’ay Roobab ay dadka iyo duunyaduba ku diirsadeen.
Tuulooyin ay ka mid yihiin Dusmada, Gobsho , iyo Cagaaran oo dhamaantoodba ka mid ahaa meelaha ay abaaruhu saameeyeen islamarkaana hoos taga degmada Gaalkacayo , ayaa haatan helay roobab lagu diirsaday.
Dhanka kale Miyiga buurta (Taalo cad) oo saaka qaar kamid ah howlwadeenada Warbaahinta Horseed Media ay booqdeen ayaa waxaa u suurta gashay in ay kula kulmaan dad reer guuraa ah oo sheegay in ay kasoo hayaameen deegaanada abaaraysan si ay xoolahooda u keenaan deleedka magaalada Gaalkacayo oo ay todobaadyo kahor roobab mahiigaan ahi ka da’een.
Xoolo iskugu jira Geel iyo Ari aad u fara ayaa xiligii aanu goobtaas booqanay ay indhahayagu qabanayeen iyaga oo daaqaya naqa curdinka ah wuxuuna dhulku ahaa mid aan u cagaaran , kalaha Xareedda iyo iftiinka qoraxduna marka ay is qabtaan ay muuqaalka dabiiciga ah ka dhigayeen mid aaney indhuhu marnaba daymadooda ka dhergeynin.
Sidoo kale waxaa goobtaas ku sugnaa dadweyne tira badan oo munaasabada Ciida aawadeed usoo dalxiis tegey miyiga (Taalo Cad) si ay u daawadaan , muuqaalada bilicsan ee ay dhulka kaga tageen roobab dhowaan ka da’ay magaalada Gaalkacayo iyo deegaanada kale ee ku xeeran.
Si kastaba ha ahaatee dadka reer Gaalkacayo oo saaka ay u suurta geli weydey in ay salaadii ciida ku tukadaan gobihii fagaarayaasha ahaa ee ay Ciidaha isugu soo bixi jireen roobab da’ayey aawadood , ayaa maanta u muuqanayey kuwo ay farxad iyo rayn rayn dheeri ahi ka muuqato maadaama ay isugu soo beegmeen Munaasabadii ciida iyo roob mudo saacado ah da’ayey kaas oo si weyn loogu diirsaday.
Axmed Mohamed Ali (Caano Geel)